တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်မဖန်တီးနိုင်ကြသူများ ...
Posted by မေဓာဝီ at 9:04 AM
လူနေမှုဘ၀တွေနိမ့်ကျကြတဲ့သူတွေအကြောင်းကြားဖူးပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့သိပ်နီးတဲ့ တွံတေးလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလိုဖြစ်နေတာ အံ့သြစရာပဲ။ မမေဒါဝီပြောသလိုပဲ ခေတ်တွေသာပြောင်းသွားတယ်။ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀က ဒီအတိုင်းဒီအတိုင်းပဲ်။ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း တို့မှာလည်း လယ်သမားတွေ အဆင်မပြေကြလို့ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလုပ်ကြတော့ စပါးစိုက်မယ့်လူဦးရေနည်းနည်းလာတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရော ဘယ်လိုဆက်သွားမှာပါလိမ့်။ ရင်မောစရာပါ။
အံ့သြစရာပဲ.. ကျနော်တို့ဘက်တွေမှာတော့ (ငယ်ငယ်တုန်းက)ပေါ့.. ၀မ်းစာစပါးဆိုတာ အထိကို မခံတာ.. ငပိရည်ကို ငရုတ်သီးမှုန့်မပါပဲ စားရတာ၊ သော့ခတ်သိမ်းထားရတာကတော့ တကယ့်ကို အံ့သြ ကရုဏာသက်စရာပါပဲ.. ကိုယ်စိုက်တဲ့ စပါးက ဆန်ကိုတောင် ကိုယ်က လုံလုံလောက်လောက် မစားရတာက ?????
ငါတို့လောက်ပဲ ဒီလိုစားနေရတယ်လို့ အောက်မေ့တာ...
လက်စ သပ်တော့ အဖေါ်တွေအများကြီး ရှိနေသေးပါလား ဟရို့.
ဟေး ......ဆွဲထားဟ...ဒီတစ်ဆူး ဆွဲပြီးရင် ထမင်းစားမယ်....
ဟေ့ အုံ လားလ၀ါး...ဟေ ရာ ရာလေး..
ရန်ကုန်နဲ့သိပ်မဝေးတဲ့ အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာတောင် လူနေမှုအဆင့်အတန်း ပညာရေးအဆင့်အတန်းက နိမ့်ကျလွန်းနေတော့ ဒီထက်ဒီ အစွန်အဖျား ဝေးလံ သီခေါင်တဲ့ အရပ်ဒေသတွေမှာဆို ဘယ်လိုနေရှာပါလိမ့်လို့ ခပ်ဆိတ်ဆိတ်နေရင်းက တွေးနေမိပါတယ်။
တို့ဆီမှာတော့ ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲ ကထမင်းကို ခလေး ရော ခွေးပါ အတူတူစားတယ်။
ခလေးကိုကွေးလည်း ဒီပန်းကန်.လူကြီးစားလည်း ဒီပန်းကန်.. ခွေးကို ကွေးလည်း ဒီပန်းကန်ပဲ။ အညစ်အကြေးဆိုတာ ရေဆေးလိုက်ရင် ပြောင်တာပဲ။ တစ်ခါတလေ အမြန်လိုရင် အနားက ခွေးကိုထိုးပေးလိုက်.။ ပြောင်အောင် လျှာနဲ့လျက် လိုက်ရင်.... ရယ်ဒီ ဖြစ်သွားပြီ။ နောက်လူအတွက် ..ထမင်းစားဖို့..
အဆင့်အတန်းခဲါခြားတယ် ဆိုတာ တို့ဆီမှာ မရှိပါဘူး။ လူ နှင့် တိရစ်ဆန်တောင် အဆင့်အတန်းမခွဲ တာဘဲ ဟာ...
လူအချင်းချင်းဆို ပြောစရာတောင် လိုမယ်မထင်ပါဘူး.
ဟေ့ အုံ လားလ၀ါး...ဟေ ရာ ရာလေး....
ဟေ လား လာ လ၀ါး...အား ရ၀ါး လာ လေ...
ဟေ့ အုံ လားလ၀ါး.....
လယ်သမား မိသားစုက မွေးလာတဲ့ စနေ့အတွက် လယ်သမားတွေ ထမင်းငတ်
တာ အဆန်းတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဆည်ထဲရေမရှိဘဲ နွေရာသီ မိုးခေါင်ခေါင်
မှာ နွေစပါး မစိုက်မနေရ၊ မစိုက်ရင် ဒဏ်ခတ်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စပါးမျိုး မစိုက်
မနေရ။ စပါးပေါ်ချိန်မှာ လယ်ထဲ စပါးထွက်ထွက် မထွက်ထွက် အ၀ယ်ဒိုင်ထဲ နိမ့်
ကျတဲ့ဈေးနဲ့ လယ်ဧက ဘယ်လောက်မှာ စပါးဘယ်နှစ်တင်း မသွင်းမနေရ။ သတ်
မှတ်ထားတဲ့ ဈေးထက်မြင့်တဲ့ မြေသြဇာကို မ၀ယ်ရင်လဲ မဖြစ်။ မိုးကြီးလို့ လယ်ရေ
မြုပ်ရင် သွားပြီပေါ့ တနှစ်စာ။ ပိုလို့ရောင်းဖို့ နေနေသာသာ...ကိုယ့်အတွက် တနှစ်
စာတောင် မကျန်ပါဘူး။ ပြောရင်တော့ ဆုံးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး....မမေ...
တခြားနိုင်ငံက လယ်သမားတွေ လယ်ထဲသွားရင် ကားမောင်းသွား၊ လယ်လုပ်ရင်း
ဟမ်းဖုန်းကိုင်နေတဲ့ ခေတ်မှာ မြန်မာပြည်က လယ်သမား ထမင်းငတ်နေပါတယ်..
1/17/2007 8:09 PM
ဒီ့ထက်များ ထက်နိမ့်ကျနေရင်တော့ အ၀ီစိထက်အောက်ရောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ် ဒါပေမယ့် အ၀ီစိကိုဖောက်ပြီးဟိုဖက်ကိုထွက်သွားရင် အာကာသထဲပြန်ရောက်လိမ့်မပေါ့....
ဟုတ်ပါတယ်မမေဓာ၊ ရင်နင့်စရာပါပဲ။ တွံတေးဆိုတာ ရန်ကုန်နဲ့ နီးနီးလေး။
ဒလ၊ ဆိပ်ကြီး ခနောင်တို စတဲ့ နေရာတွေလည်း ဘာများ ထူးမလဲ။ စဉ့်အိုးတန်း ကနေ တဖက်ကမ်း ကူးလိုက်ရင် ရောက်နိုင်တဲ့ ဒလကိုတောင် တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင် ကြဘူး၊ ဒါကိုပဲ...
ရန်ကုန်က ကြပ်သိပ်လွန်းပြီး နောက်ထပ် တိုးတက်စရာ မရှိတော့လို့ ပျဉ်းမနားရွှေ့ပါတယ်... တဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့ကို အားမနာ ရင်တောင် ရန်ကုန်တိုင်းကို အားနာသင့်တယ်။
1/21/2007 5:55 PM
ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေက မြို့နေ လူတန်းစားတွေ ကြားရင် ကိုယ့်နားတောင် ကိုယ်မယုံနိုင်ပါဘူး၊ ဒီစာလေး ဖတ်ပြီးတော့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဒီနွံထဲက မတက်နိုင်ကြတဲ့ တောင်သူတွေအကြောင်း အကြာကြီး တွေးမိသွားတယ်၊ ကျနော့် အမေကလည်း လယ်သမား မျိုးရိုးက လာခဲ့တာပါပဲ..။
2/24/2011 11:59 PM